Sanadka bilaa xagaaga: goormuu ahaa, sababaha iyo cawaaqibta | Saadaasha Shabakadda
Waan ognahay in cimilada ay jiri karaan dhacdooyin aan caadi aheyn oo kuxiran xaaladaha qaaska ah qaarkood. Cimilada noocan oo kale ah waxaa saameyn ku yeelan kara qarax weyn oo fulkaano ah. Kuwa caanka ah sanad bilaa xagaaga ah laga bilaabo 1816 wuxuu ahaa qalab dhammaystiran oo ka tarjumaya waxa dhinacyada meeraha ay si dhab ah u saameyn karaan cimilada.
Qormadan waxaan kuugu sheegaynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato sannadka bilaa xagaaga iyo sida xaaladaha qaarkood ay u saameeyaan cimilada adduunka.
1 Sannad aan xagaa lahayn
2 Saamaynta sanad la'aan xagaaga
Sannad aan xagaa lahayn
Dillaaca Mount Tambora, oo ah volcano ku taal Bagua inta udhaxeysa Abril 5 iyo 10, 1816, daruuro aad u tiro badan oo boodh iyo dambas ah ayaa lagu sii daayay jawiga. In ka badan 12.000 oo qof ayaa dhintey 24-kii saacadood ee ugu horreeyey, badanaa waxaa sababa ashfall iyo qulqulka qulqulka. Intaa ka dib, 75.000 oo qof oo kale ayaa u dhintay gaajo iyo cudur ka dib markii uu qarxay qaraxan ugu weynaa 2.000 sano.
Ahaanshaha mid ka mid ah qaraxyadii ugu weynaa ee adduunka ka dhaca, malaayiin tan oo dambaska fulkaanaha ah iyo 55 milyan oo tan oo ah baaruud dioxide ayaa la soo daayay oo kor ugu kacay joog dhererkiisu yahay 32 kiiloo mitir. In kasta oo uu ahaa qarax qarqarayay, haddana dabayshu waxay lahayd mowjado xoog leh oo jiidaya daruuraha daadsan ee daadsan galbeedka. Tani waxay ka dhigtay wax kasta oo ay soo saarto fulkaanaha inay ku wareegaan dhulka laba toddobaad oo keliya.
Laba bilood ka dib mawjadahaasi waxay gaareen Pole-ka Woqooyi iyo Pole-ka Koonfureed. Qaybaha baaruudda wanaagsan ayaa hawada ka joojiyay sannado. Xagaagii sanadka ka dib markii uu qarxay, waxaa la soo saaray xijaab danbas aan la arki karin ah oo qariyay meeraha oo dhan. Dhinacan tarjumaadda ahi waxay ka tarjumayeen iftiinka qorraxda umana oggolayn in falaadhku ay gaaraan dusha sare, iyagoo yareeyay heerkulka meeraha oo dhan Intaas waxaa sii dheer, waxay sababtay cimilada adduunka oo dhan. Tani waa sababta sanadka aan xagaaga lahayn uu u dhacay sanadka 1816.
Maaha nooc aargudasho rabbaani ah sidii loo fikiray waqtigaas, laakiin qaraxyadii ugu halista badnaa ee fulkaanaha Tani waxay keentaa in cimiladu qabowdo dhawr darajo muddo sannado ah.
Saamaynta sanad la'aan xagaaga
Saamaynta buuxda ee qaboojinta meeraha oo dhan waxaa laga soo dheegtay musiibada 'Tambora cataclysm' mana bilaabin in la dareemo illaa sannad kadib. Daruuraha dhibcaha firidhsan ee stratosphere waxay yareeyeen qadarka tamarta qorraxda ee dhulka gaadha. Hawada, dhulka, ka dibna badaha ayaa hoos u dhigay heer kulka. Tan waxaa si fiican u darsi karaya siddooyinkii koritaanka ee geedihii Yurub. Istuudiyahaan wuxuu noo sheegayaa in sanadkii 1816 uu ahaa sanadkii labaad ee ugu qabow Waqooyiga Hemisphere tan iyo sanadkii 1400.
Xilliga xagaaga iyo deyrta oo is rog-rogaya, daruurtu waxay ku dillaacday London qorrax-dhacyo casaan, guduud iyo liin ah. Waxaa la oran karaa cirka ayaa meelaha qaar dab ka lahaa. Guga 1816 weli baraf ayaa ka jiri doona waqooyi-bari Mareykanka iyo Kanada. Qabowgu sidoo kale wuxuu gaadhay Tennessee oo qabowgu wuxuu socday ilaa Juun. Kuwani waxay ahaayeen heerkul hoose oo meelaha qaarkood sida New Hampshire ay ficil ahaan suurtagal ahayn in dhulka la falo.
Bishan gudaheeda waxay ahayd hawo qabow oo duufaano waawayn ayaa ku dhacay kuwaas oo inbadan Shimbiraha ayaa barafoobay oo ku dhintey jidadka laba usbuuc uun ka hor xilliga xagaaga. Dalagyo badan ayaa aakhirkii ku duugmay beeraha dhaxan aad u daran awgeed. Tiro badan oo adhi ah ayaa sidoo kale ku halaagsamay dhaxanta. Waqtigaani waa xilli cilmiga saadaasha hawada ee halista ah uusan wali jirin mana jirin wax saadaalin cimilo nooc ay tahayba.
Maqnaanshaha sayniska, cibaado-yahannada waxay sameeyeen duufaannada oo dhan waxaa sababay Ilaah wuxuu astaan ​​u yahay caro rabbaani ah Yurub sidoo kale waxay la kulantay heerkul aad u hooseeya iyo gu 'qabow iyo qabow ka badan intii caadiga ahayd. Qiimaha sare ee baroonka awgeed, waxaa jiray carqalado kala duwan oo ka dhacay Faransiiska.
Waxaa jira daraasado fara badan oo ku saabsan sanadka bilaa xagaaga waxayna badanaa ku saleysan yihiin falanqaynta giraanyada geedaha Yurub. Xalqadahaani waxay tilmaamayaan in sanadkan 1816 uu ahaa kii ugu qabow tan iyo 1400. Xiisadaha ku soo kordhay dadka deegaanka ayaa kordhay. Qabow xoog leh iyo abaar ayaa meelo badan ku cufay cawskii iyo dalagyadii hadhuudhka, iyadoo dabaylo caadi ah oo Oktoobar ah ay dhici doonaan Ogosto. Aagga Yurub waxa ka da'ayay roobab joogto ah iyo baraf culus, gaar ahaan aaga buuraha Switzerland. Tani waxay sababtay in wabiyada iyo webiyada ay buuxdhaafaan.
Guryihii reer miyiga waxay bilaabeen inay si deg deg ah uga shaqeeyaan sidii loo badbaadin lahaa khudaarta iyadoo cawskiina oo dhan lagu raray doomo. Waxay ahayd dariiqa kaliya ee lagu badbaadin karo dalagyada intii suurtagal ah. Jarmalka dhexdiisa baradhadu waxay ku dhammaatay qurmuun iridda dhulka ee duufaannada oo baabi'iyey inta badan dalagyadii. Dalagyada dalaggu sidoo kale way isbahaysteen, canabku kuma soo bislaan beeraha canabka ah waxaanan arkaayay maalin kasta ku dhowaad 5 toddobaad oo isku xigta.
Magaalada Paris waxaa ka jiray qaar ka mid ah mas'uuliyiinta kaniisadaha kuwaas oo amar ku bixiyay in salaado gaar ah la tukado muddo 9 maalmood ah si ay isugu dayaan inay Ilaah weydiistaan ​​inuu soo afjaro cimiladan xun. Ganacsatada guud ahaan Yurub ayaa sare u qaaday qiimaha, halka dhibaatada dadka saboolka ahi ay gaadhay heerar cabsi leh, dhammaantoodna waxay filayaan dalagyo liita. Spain iyo Boortiqiiska labadaba qabowgu wuxuu kusii adkaayey heerkulka celcelis ahaan qiyaastii 2-3 darajo oo ka hooseeya heerka caadiga ah.
Waxay ahaayeen gaar ahaan roobab badan bishii Ogosto, iyagoo raggu guud ahaan qalalay. Qabowgii iyo huurka ayaa ku dhammaaday waxyeellooyin dalagyadii dalka oo dhan. Ilaaliyaha cirka ayaa xusay in ay jireen oo kaliya 3 maalmood oo aan daruur lahayn bishii Julaay oo dhan. Heerkulka qabow wuxuu ku dhammaaday inuu dilo midhaha, gaar ahaan canab, maxaa yeelay waxaan sameeyay qayb yar oo ka mid ah goosashada. Tani waxay soo saartay khamri tayo liita. Geedaha saytuunka sidoo kale waxay u nugul yihiin qabowga iyo kuleylka mana soo saaraan midho tayo leh.
Marka la soo koobo, waxay ahayd musiibo aad u weyn oo ka dhalatey qarax fulkaaneed baaxad weyn. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan ka baran karto sanadka bilaa xagaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Sanadka bilaa xagaaga